Baolina kitra :: Mety haka mpanazatra hanampy azy eto an-toerana i Nicolas Dupuis • AoRaha
Baolina kitra Mety haka mpanazatra hanampy azy eto an-toerana i Nicolas Dupuis
Asa roa no napetraka amin’ilay mpanazatra frantsay, Nicolas Dupuis nanomboka tamin’ny alarobia teo. Sady tale teknika nasionaly no mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny taranja baolina kitra na ny Barea ny tenany.
Mety haka mpanazatra malagasy hanampy azy anefa izy raha ny filazany, teny amin’ny Ivotel Ambohidahy, omaly. “Nekeko ireo asa nampandraiketana ahy ireo. Niteny kosa ny Federasiona iraisam-pirenen’’ny baolina kitra (Fifa) fa tsy vitan’ny olona iray ireo asa roa ireo. Mety haka mpanazatra malagasy iray aho, noho izany. Aloha loatra anefa raha amin’izao fotoana izao no hilaza ny tena fanapahan-kevitro. Ho hita miandalana eo izany”, hoy ity teknisiana vahiny ity.
Amin’ny talata ho avy izao vao hanao ny sonia rehetra amin’izao fifanarahany eto Madagasikara izao i Nicolas Dupuis amin’ny fanohizana ny asany ao anatin’ny efa-taona, araka ny fanazavany. Tsy niala tanteraka ao amin’ny klioba frantsay FC Fleury kosa ny tenany na dia efa mipetraka eto an-toerana aza. “Manana ny trano fonenako eto aho. Ilaiko ihany koa anefa ny mijery ny fivoaran’ireo mpilalao mpila ravinahitra any ivelany. Noho izany dia hizara roa ny fotoanako fa tsy hijanona tanteraka eto”, hoy ny fanampim-panazavana nomeny.
Mpilalao amin’ny CAN 2021
Efa manohy ny asany i Nicolas Dupuis na mbola fifampiresahana fotsiny ihany aza no vita. Nanaraka sy nanampy ny fanomanan’ireo mpilalaon’ny Barea amin’ny fihaonany manoloana an’i Namibia rahampitso izy. “Niresaka tamin’i Jean François Debon, tale teknika nasionaly teo aloha, aho. Hojerena amin’io lalaon’ny Barea io izay mpilalao lohalaharana mety hampidirina amin’ny ekipam-pirenena hiatrika ny dingana fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika (Can) amin’ny taona 2021 », raha ny voalazan’i Nicolas Dupuis. Efa manana hevitra izy amin’ireo mpilalao mpila ravinahitra hampidiriny amin’ny ekipa nasionaly.
Eo am-pikarakarana ny lalao ara-pirahalahina hataon’ny Barea ny tenany. Mety any amin’ny volana oktobra 2019 any ho any no hanatanterahana izany eto an-toerana. “Mbola manana herinandro izahay teknisiana handinihina ny mikasina izany. Mety eo anelanelan’ny 7 ka hatramin’ny 15 oktobra no hanaovana ny lalao ara-pirahalahin’ny ekipam-pirenena malagasy. Efa mijery ny firenana vahiny hifandona aminy izahay”, hoy i Nicolas Dupuis.
Famoahana didy :: Iharan’ny tsindry hatrany amin’ ny faran-tampony ireo mpitsara
Fanararaotam-pahefana sy fanodinkodinam-bola :: Voasazy handoa onitra sy higadra telo taona ny sefo Cisco iray teo aloha